विचार Archives - Chautari Post Online
Jul182019 by Chautari Post OnlineNo Comments
मूल खबर, विचार
मुक्ति पौडेल जब आर्थिक वर्षको अन्त्य आउँछ, त्यसबेला मात्रै जुर्मराउने विकास गतिविधिले नेपाल आक्रान्त छ । यही अन्तिम बेलामा हतारो गर्ने शैली ‘असारे विकास’ का नामले चर्चित छ । वर्षौंदेखि आर्थिक वर्षको ‘क्लोजिङ’ अर्थात् असार मसान्तसँगै विकास गतिविधिहरूले देशभरि नै जर्बजस्त रूपमा तीव्रता पाउने भएकाले आम सर्वसाधारणले असारे विकासलाई नजिकबाटै चिन्ने गरेका छन् । आमसञ्चारका माध्यमहरूमा असारे विकासका गुणस्तरहीन काम र दुष्प्रभावका बारेमा बाक्लै चर्चा र बहसहरू हुने गर्छन् । कोही निर्माण व्यवसायीहरु धुलोमाथि नै प्राइमर लगाउँदै कालोपत्रे गर्ने त कोही हतार हतारमा सडकको ट्रयाक ओपनदेखि अन्य कामहरु गर्नमा व्यस्त छन् । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा आएर हतारमा गरिएको यस्ता विकास कति महिना टिक्ला नागरिकहरु सरकारसमक्ष प्रश्न गरिरहेका छन् । आजभोलि विकासे अड्डाका हाकिमलाई भने निर्माण व्यवसायीलाई योज
सुवास जीसी लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध निकै सरल र निकै जटिल कुरा हो । सम्बन्धका आधारहरु पनि उत्तिकै सरल र जटिल हुन्छन् । शायद ती आधारहरु बढीभन्दा बढी बिश्वास नै हुन् । जब विश्वासमाथि संकट उत्पन्न हुन्छ, सम्बन्धमा दरार पैदा हुन्छ, तब सम्बन्धहरु बिग्रन थाल्छ्न्, भत्कन थाल्छन र टुक्रिन्छन् । लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध पनि ठिक त्यस्तै हो । कसको छोरा, कसको छोरी, बेग्लै परिवार, बेग्लै समाज, बेग्लै रीतिरिवाज, बेग्लै धर्म, संस्कृति, जात र सम्प्रदायका केटाकेटीबीच भावनात्मक सम्बन्ध कायम गरेर बिहे गरिन्छ । लोग्ने र स्वास्नीबीच धेरै कुराहरुमा समझदारी हुन्छ । त्यस्ता समझदारीहरु सबै विश्वासमा गरिन्छन् । दुईजनाको जिन्दगी त्यतिञ्जेलसम्म सङ्गै जान्छ, जतिञ्जेल विश्वास टिकिराख्छ, समझदारी भइराख्छ । जब सम्बन्धमा शंका उत्पन्न हुन्छ, अविश्वास उत्पन्न हुन्छ, असमझदारी सिर्जना हुन्छ भने सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ, त
विनोद नेपाल वर्तमान सरकार गठन भएयता सरकार पटक–पटक विवादमा परेको छ । कहिले सरकारले लिएका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण, कहिले एकपक्षीय ढंगमा अनुचित तथा अस्वाभाविक निर्णय गरेका कारण, कहिले विवादास्पद प्रावधानसहितका विधेयकका कारण र कहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जिम्मेवार नेताहरुका अस्वाभाविक अभिव्यक्तिका कारण । सरकारकै कारण जनता पटक–पटक सडकमा ओर्लनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मुलुकले फड्को मार्दै छ भन्ने गरिए पनि त्यो भ्रममात्र भएको छ । मुलुकले सही दिशा नै लिन सकेको छैन । विधिको शासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । जनताका आकांक्षा र अपेक्षामाथि तुषारापात भएको छ, नेताहरुमा सुविधाभोगी प्रवृत्ति बढेको छ । जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेको छैन । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन । अनियमितता र बेथितिमा सुधार आउन सकेको छैन । यही सन्दर्भमा पछिल्लोपटक विवादमा प
Jul172019 by Chautari Post OnlineNo Comments
नरेन्द्रजंग पिटर दिमागमा खुजुली सल्केपछि लुते महात्म्य लेख्न हौँसिन्छु । खसखस भएपछि पुराना डायरीका पाना पल्टाउन थाल्छु । हिजो पश्चिम नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा भौरीँ पर्व मनाइयो । चन्द्रग्रहण मनाइयो । भगवान चन्द्रलाई ‘बिटुलो’ पारेर छेकिदिएकोमा ‘विश्वासीहरू’ले ग्रहण पखाले । चन्द्रमाबाट अन्तरिक्षयात्रीहरु भने हामीलाई गज्जबले नियालिरहेका थिए । राजनीति र विश्वासमा पनि अहिले ग्रहण लाग्या’छ । सो ग्रहणका दोष ककसमाथि लागेका छन् ? ककसले कसरी पखाल्ने हुन् कुन्नि ? आज साउने संक्रान्ति कृषि पर्व । साँस्कृतिक चेतसँग गजबकै सम्बन्ध छ । रोपाइँ सक्ने, हलो पखाल्ने, गोरु नुहाइदिने, हिलासँग पौँठेजोरी खेलेर थकित ज्यान सुस्ताउने पर्व हो । तर, त्यो भन्दा पनि अर्को पाटो लुतो फाल्ने चलनको महत्व र महात्म्य भने गज्जबै छ । यो कतै राँके पर्व कतै भोस्सो र बयालडाँडी खेलिए तापनि मूलतः लुते देवताको गाली आराधना गर्न
नारायण ढकाल केही समययता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चारैतिरबाट आलोचित भएका छन् । विपक्षी दलहरूको कुरा छाडौं, बुद्धिजीवी, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, लेखक, कवि, किताब उद्यमी र आर्थिक संसारसित गाँसिएका जनताको ठूलो तप्का उनको विपक्षमा उत्रेको देखिन्छ । निर्मला पन्तका हत्यारा र बलात्कारीलाई जोगाउनेदेखि भारतबाट आयात हुने विषादीयुक्त फलफूल र तरकारीलाई विना जाँच देशभित्र पस्न दिने प्रकरणसम्मका घटनामा उनको सरकारले कहिल्यै पूर्ति हुन नसक्नेगरी विश्वास गुमाएको छ । धेरैतिरका विरोधका कारण सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय मुद्दामा घुँडा टेक्नुपरेको छ । विरोधको यो उपक्रम उनको आफ्नै पार्टीभित्र पनि खरबारीमा सल्केको डढेलोझैं छ । यी सबै समस्याका कारक प्रधानमन्त्री ओली आफैं हुन् । जसरी उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई अराजनीतिक गुटबन्दीको निम्छरो दलदलतिरबाट अघि बढाए, अहिले उत्पन्न सबै समस्या त्यस
कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यप्रणाली
- अमर झाँक्री ‘सञ्जीव’ कम्युनिस्ट पार्टी समाजको सबैभन्दा अग्रगामी, समुन्नत र क्रान्तिकारी परिवर्तनको संवाहक शक्ति हो । माक्र्स–एङ्गेल्सले जीवनभरको कष्टसाध्य सङ्घर्षद्वारा खोज र अनुसन्धानपछि प्रमाणित गर्नुभएको तथ्य के हो भने मानव समाजमा पुँजीपति वर्ग र श्रमिक वर्ग गरी दुई वर्ग रहेका हुन्छन् । पुँजीवादी राज्यसत्ता र उत्पादन सम्बन्धले श्रमिक वर्गलाई विशाल सङ्ख्यामा वृद्धि गर्दै लैजान्छ भने समाजको सानो हिस्सामा रहेको पुँजीपति वर्गले विशाल सङ्ख्यामा रहेको श्रमिक वर्गमाथि बहुरूपी शोषणलाई बढाउँदै लैजान्छ र ती दुई वर्गहरूका बीचमा वर्गसङ्घर्ष सञ्चालन हुन पुग्छ । वर्गसङ्घर्षद्वारा पुँजीपति वर्गको नियन्त्रणमा रहेको राज्यसत्ता श्रमिक वर्गले आफ्नो नियन्त्रणमा लिनेछ र त्यो राज्यसत्ता वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादमा प्रवेश गर्नेछ जहाँ मानवले मानवमाथि गर्ने सम्पूर्ण उत्पीडनहरूको अन्त्य हुनेछ । त्यसप
Jul152019 by Chautari Post OnlineNo Comments
नदी प्रणली मानवीय हस्तक्षेप तथा जलवायु परिवर्तनमा प्रभाव
कृषि र किसान, विचार
डा. केदर कार्की काठमाडौं । आदिकालदेखि नदीहरु स्वच्छ जलको अमुल्य श्रोत थिए । तिनको जलको उपयोग पेयजल आपूर्ति निस्तार आजीवीका तथा खेतीपातीका लागि गरीन्थियो । पछिल्लो केही सालहरु देशका अधिकांश नादीहरुको गैर मनसुनी प्रभाहमा कमी भई राखेको छ । साना नदीहरु तेजीले सुखी राखेका छन् र लगभग सबै नदी प्रणालीहरुमा प्रदुषण बढी राखेको छ । यो स्थिती हिमालयीन नदीहरुमा कम तथा यस प्रायदिूपका नदीहरुमा अधिक गँभिर छ । यो परिवर्तन भने प्राकृतीक हैन । विज्ञहरु अनुसार नदी प्राकृतीक जलचक्रको अभिन्न अंग हो । प्राकृतीक जलचक्र अन्तरगत नदी आफ्नो जलग्रहण क्षेत्रमा परेको पानीलाई समुन्द्र वा तालहरुमा जम्मा गर्दछ । यसले कछारलाई परिमार्जन गरेर भुआकृतीहरु निर्माण गर्दछ । यो जैवीक विविधताले परिपुर्ण हुन्छ । यस्ले प्रकृती दूारा नियन्त्रीत व्यवश्याको मददतले बर्षाजल सतहीजल भुजलको घटकहरुको बीच सन्तुलन राखेर अनेक सामाजिक तथ
- देवनारायण शाह सत्ता, शासक, सरकार यी सबै जनताको सामाजिक सम्झौताबाट निर्माण भई कायम रहन्छन् । जब शासकहरूले जनता र समाजमा कबुलियत गरेका आश्वासनहरू न्यायसंगत समाज, भेदभावविहीन समाज, उत्पादनमा सामान वितरण, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, हत्याहिंसाविहीन राज्य, नैसर्गिक अधिकारविरुद्ध शासकबाट हुने भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, भेदभावरहित समाज, बलात्कार, महँगी, झूट्टा आश्वासन, भ्रम, अन्याय, अत्याचार असमान वितरण, दलाली, नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित हुन थालेपछि शासक र जनताबीचको सम्झौता भङ्ग हुन्छ र जनताले क्रान्तिमार्फत सत्ता शाषकलाई ढाल्छ । यस्तै परिणामले राणा शासकहरू ढले र १० बर्से जनयुद्धले पञ्चायती व्यवस्थाका राजा– महाराजा पनि ढाले । १० वर्षको जनयुद्ध स्थापना कालदेखि नै मालेमावादका सैद्धान्तिक जगबाट सुरुआत भएको थियो । यसको नीति सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वअन्तर्गत वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य
Jul142019 by Chautari Post OnlineNo Comments
शताब्दी कम्युनिस्ट का. खगुलाल गुरुङ
मोहनविक्रम सिंह का. खगुलाल गुरुङ शताब्दी कम्युनिस्ट हुनु हुन्छ । उहाँ १०१ वर्ष पुगेर १०२ वर्षमा लाग्नु भयो । त्यसरी उहाँ नेपालको सबैभन्दा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट हुनु हुन्छ । शायद संसारको नै उहाँ सबैभन्दा ज्येष्ठ कम्युिनस्ट हुनु हुन्छ । ‘शायद’ यस कारणले विश्वमा अरू पनि कोही त्यति उमेरको कुनै कम्युनिस्ट भएको कुरा मलाई थाहा छैन र त्यो कुरा मैले निश्चित रूपले भन्न सक्दिनँ, त्यसैले ‘शायद’ शब्द जोडेको छु । उहाँ २०१० सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमा सामेल हुनु भएको थियो । त्यसरी उहाँ गत करिब ६५ वर्षदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संलग्न हुनु हुन्छ, यद्यपि गत करिब एकाध दशकदेखि बृद्ध अवस्था, शारीरिक अशक्तता र रोग समेतका कारणले उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय हुन सक्नु भएको छैन । तर, पार्टी र क्रान्तिप्रतिको उहाँको आस्था अविचलित छ र अहिले पनि अविचलित छ । उहाँले कान राम्रोसँग सुन्नु हुन्न । तर, आँखाले राम्ररी दे
आहुति काठमाडौँ — आधिकारिक र औपचारिक वार्ता प्रक्रिया थालनीमा उपेक्षा, असंवैधानिक रूपमा पार्टीमाथि प्रतिबन्ध, व्यापक रूपमा गिरफ्तारी र सर्लाही एवं भोजपुरमा सुनियोजित रूपमा मच्चाइएको हत्याकाण्डलाई मात्र पनि एक ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्दा वर्तमान सरकार विप्लवी नेकपालाई युद्धका निम्ति आमन्त्रण गरिरहेको अन्तर्य बुझ्न सजिलै सकिन्छ । सरकारको यसप्रकारको रवैयाको प्रमुख प्रतिपक्षले विरोध गरिरहेको छैन । सरकारमै टाँसिएका र पछि भए पनि टाँसिने अवसर कुरिबसेका अरू साना पार्टीले पनि खासै सरोकार गरेका छैनन् । खप्र ओली र पुक दाहाल नेतृत्वको नेकपा (नेकपा) भित्रका आलोचनात्मक चेतधारी मानिएका नारायणकाजी श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल प्रभृत्तिको पनि वाक्य कतै अन्तर्ध्यान भएकै छ । यो समग्र परिदृश्यबीच यही निष्कर्ष निस्कन्छ कि राज्य विप्लवी नेकपालाई दमनद्वारै सिध्याउने चाँजोमा दृढ छ । नेकपा (नेकपा) को सरकार अ